I-140m² yomtsalane emaphandleni kwisitayile somyili
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguWilliam
Umtsalane ezilalini. Ukwabelana neqabane lakho, usapho okanye abahlobo. Siye sayihlaziya ngokupheleleyo iattic yale fama intle kakhulu yaseBrabant ukuze ibonelele ngesithuba se-140 m2. Xa uvuka kusasa, unombono omangalisayo wamasimi, uzolile ngokupheleleyo.
Ukuba unqwenela, i-chalet yethu yasehlathini inokukwamkela ngorhatya oluncinci njengasezintabeni' okanye 'i-boho chic' kunye ne-brazier ehlotyeni (yongeza i-40 eur). Imidlalo yamanzi iyafumaneka.
Indawo yokuhlala enesitayile esiphezulu ikwindlu entle yasefama ukusukela ngo-1835. Ilungiswe kakuhle kwaye yahlaziywa kakuhle. Inendawo yokuhlala enkulu eyi-70m² kubandakanya ikona yokufunda, igumbi lokuhlala elikhulu elinescreen kunye neprojektha, igumbi lokutyela kunye nekhitshi elixhotyisiweyo (ifriji, iwashawashi, ikofu, isitovu seceramic, imicrowave). Indawo yasebusuku ye-75m² yenziwe ngegumbi lokulala eliphambili (ibhedi ephindwe kabini 180x200) kunye nesitovu sepellet, igumbi lokuhlala elincinci elinombono wepanoramic yegadi. Igumbi lokulala lomntwana kunye ne-wardrobe kunye nebhedi enye enokuguqulwa ibe yibhedi ephindwe kabini. Igumbi lokuhlambela elineshawa yokuhamba kunye nesinki enye.
Indawo yokuhlala ikumgama oziikhilomitha ezingama-20 ukusuka kwidolophu entle kakhulu yaseNamur, ikwayindawo esizilolongela kuyo imidlalo yasemanzini, okanye uhambo oluhle ngesikhephe xa uceliwe kwaye ngokubeka indawo (jonga iifoto).
300" TV ene-I-Netflix
Ifama ikwilali yase-Autre-Eglise apho uya kudibana nabahambi abaninzi njengabakhweli. IRavel ikufuphi ukuze uhambe. Iivenkile zikude ngemizuzu nje embalwa. Qhagamshelana nesikhokelo malunga needilesi ezingcono kunye neengcebiso.
Ewe, siya kufumaneka ukunika iidilesi ezifanelekileyo. Ngexesha lonyaka, amaqanda amatsha kunye nemifuno evela kwigadi yasekhitshini iya kunikezelwa kuwe. Akukho qela kwi-loft, ngenxa yentlonipho yabamelwane. Ukuba ngaphezulu kwe-4 yabantu abadala, sincoma ukubhukisha i-chalet. Uya kuba umbono wokuba kwindawo yokutyela nje wena apho uya kuba ukupheka ke ekubeni sikunike zonke izixhobo fondue, raclette, pfumerile ilitye okanye zeBBQ ngomlilo .... hayi, ngokuhlwa ayilibale eqinisekiswe !
Ewe, siya kufumaneka ukunika iidilesi ezifanelekileyo. Ngexesha lonyaka, amaqanda amatsha kunye nemifuno evela kwigadi yasekhitshini iya kunikezelwa kuwe. Akukho qela kwi-loft, nge…